संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली फौजमा अमेरीका पहिलो, नेपाली स्थानमा त ? (बिबरण सहित हेर्नुहोस ) – पुरा पढ्नुहोस्……
संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली फौजमा अमेरीका पहिलो, नेपाली स्थानमा त ? (बिबरण सहित हेर्नुहोस )
काठमाडौँ । संसारभरको सेनाको तागतको विश्लेषण गर्ने शोध संस्था ‘ग्लोबल फायर पावर’ले सन् २०१७ मा सैन्य तागतको तुलनात्मक सुचि सार्वजनिक गरेको छ । यसमा १३३ राष्ट्र समावेश गरिएको छ ।
सैन्य तागतको विश्लेषणमा सेनाले प्रयोग गर्ने परम्परागत हतियारलाई मात्र समावेश गरिएको छ । यस गणनामा परमाणु हतियारहरु समावेश गरिएको छैन ।
प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरु
यो सुचिमा अमेरीका पहिलेझैं पहिलो नम्बरमा रहेको छ । सन् २०१७ मा अमेरीकाको रक्षा बजेट ५ खर्ब ८७ अर्ब अमेरीकी डलर थियो । उसँग १३ लाख सक्रिय सेना र ९ लाख ९० हजार रिजर्भ फौज रहेको छ । अमेरीकाको मुख्य शक्ति भनेको उसको हवाई र युद्धपोतको हो । उसँग १३ हजार युद्ध विमान रहेका छन् भने उसँग १९ वटा युद्ध पोत रहेको छ । यो भनेको बाँकी सम्पूर्ण शक्तिको युद्धपोतको कुल योग भन्दा धेरै हो । अमेरीकाले आफ्ना युद्धपोतहरु संसारभर रणनैतिक स्थानमा तैनाथ राखेको छ ।
इन्डेक्समा नेपाललाई ९७ औं स्थानमा राखेको छ । नेपालको ९५ हजार सक्रिए सेना र ६२ हजार रिजर्भ फौजको जोडेर कुल एक लाख ५७ हजार को सैन्य फौज रहेको छ । इन्डेक्समा नेपालको सन् २०१७ को रक्षा बजेट २१ करोड अमेरीकी डलर उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त नेपाली फौजको तागत भनेको उसको साथ रहेको २२ वटा विमान र १८ वटा हेलिकप्टर हो । नेपालको सैन्य तागतमा १४८० वटा सशस्त्र बाहन पनि रहेको छ ।
Prevदु:खद खबर : चट्याङ लागेर १६ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते
Nextराधा चौधरीमाथि कुटपिट गर्नेलाई कारवाहीको माग गर्दै सयौँ बिदार्थीको आन्दोलन
बालअधिकारका नाममा धेरैलाई जागिर दियो, प्लेन चडायो, तर गल्लीमा काला डेक्ची चम्काउने बालबालिकाको जीन्दगी चक्मिएन
मेनपावरको धरौटी ६ करोड बनाउने तयारीमा गोकर्ण बिष्ट, बिजुली चोर्दै सशस्त्र प्रहरी ! हेर्नूहोस (भिडियो सहित)
भाइरल जोडी बखत र प्रतिभाले गरे अर्को नयाँ खुलासा, देश विदेश बस्नेलाई गरे यस्तो अपिल-हेर्नुहोस (भिडियो हेर्नुहोस)